Man City oo fariin digniin ah u dirtay Liverpool kahor kulanka ka dhici doono garoonka Anfield – Gool FM
(Liverpool) 08 Nof 2019. Maamulka kooxda Manchester City ayaa ka codsaday dhigooda Liverpool iyo dhamaan laamaha amaanka ah ee magaalada inay si xoogan u hibiyaan amaanka ciyaartoyda, si aan loo weerarin baska kooxdooda inta ay ku sii jeedaan wadada aada garoonka Anfield, kahor inta aan la baasanin kulanka la wada sugayo Axada ee horyaalka Premier League.
Liverpool ayaa isku diyaarineysa kulanka ay Axada soo aadan garoonkeeda Anfield ku soo dhaweyn doonto kooxda Manchester City, kaasoo ka tirsan kulamada 12-aad ee horyaalka Premier League.
Codsiga Man City ayaa yimid kaddib markii ay faafiyeen taageerayaasha kooxda Liverpool fariimo ay ku codsanayaan inay isugu soo baxaan wadada loo maro garoonka Anfield, si loo argagax galiyo nafsiyan naadiga ay markale ku dagaalamayaan xilli ciyaareedkan hanashada horyaalka Premier League ee Sky Blue ka hor bilaabashada kulanka la wada sugayo.
Bishii Abriil 2018, taageerayaal badan oo kooxda Liverpool ah ayaa ku soo dhaweeyay baska ay saarnaayeen kooxda Man City markii ay ku sii jeedeen wadada loo maro garoonka Anfield, laakiin qaar ka mid ah jamaahiirta oo aad u careysnaa ayaa waxay baska ku tureen dhagxaan, dhalooyin iyo gasacado, waxayna sidoo kale ku shideen dab, iyagoo jawi cabsi leh ku abuuray wiilasha tababare Pep Guardiola.
Weerarkaas ayaa wuxuu waxyeelo gaarsiiyay baska Man City, waxayna kooxda ku qasbanaatay inay raadsato qaab kale ay dib ugu laaban kareen magaalada Manchester kaddib dhamaadka ciyaarta, mana jirin xitaa shaqsi ka mid ah dadkii ku lugta lahaa weerarkaasi oo la qabtay, iyadoo ay kaliya ugu dambeyntii Liverpool ka bixisay raali galin.
Si kastaba ha noqotee, Man City ayaa laga badiyay kulankaas, kaasoo ahaa lugtii labaad ee wareega siddeed dhamaadka tartanka Champions League, kaddib markii loogu awood sheegtay 3-0, xilli kulankii lugta horena gurigooda loogu awood sheegtay 1-2.
Manchester City ayaa ku soo laabatay Liverpool bishii Oktoobar 2018 si ay u wada ciyaaraan lugta koowaad ee horyaalka Premier League xilli ciyaareedkii hore, iyadoo ay labada kooxood barbaro ku galeen garoonka Anfield, wax walbana si nabad gelyo ah ayey ayay u socdeen.